ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း: December 2008
New Year Wish From U Toe Aung
May you get prosperous evermore
Dear political partner,Sir
It,sablessing.Happy new year.I wish happiness to every members of yours Democracy partner comrades.I respect and cordially thank you all for your actively movement Burma Democracy Revolution ( BDR ). We are all families. I wish, may you and Oversea Democratic Group for Burma struggle for BDR with courage and resolutions.
Realise me,I will keep doing stressful whatever I can meet and if I have passion for Democracy to get,I will do my best for BDR asahistorical duty.Comrades! don,t forget that we are making our own history.When we get victory,we will meet together happily.I have no doubt to believe.
" Our Burma Democracy Revolution must be won surely".
Posted by Ashin dhamma at 4:53 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 4:48 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 7:30 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 11:53 PM0comments
ဟိုးအရင်နှစ် ၅၀ ကျော်ကာလ
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ သူတို့ဘာမှမှု
Posted by Ashin dhamma at 11:37 PM0comments
ဘဝအလင်းရောင် ထွန်းလင်းပြောင်ဖို့ 
လင်းရောင်မရှိ သုညအသိမို့ 
ဘဝအသိ လင်းရောင်ရှိပြီမို့ 
Posted by Ashin dhamma at 12:52 AM0comments
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့ နျူကလီးယား လက်နက် သုံးနိုင် ကြတော့ မည်လား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နျူကလီးယား လက်နက်များ တပ်ဆင်နိုင်ရေး အတွက် မြန်မာ စစ် အစိုးရက ပိုမို အားထည့် ကြိုးပမ်း လာမှုနှင့် အတူ မြန်မာ့ နျူကလီးယား လက်နက် အစီအစဉ်မှာ မကြာမီ နှစ်များ အတွင်း အသက်ဝင် လာဖွယ်
ရှိနေ သည်။ ကျွမ်းကျင်သူ များ၏ အဆိုအရ မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း နျူကလီယား လက်နက်များ ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်သော အလားအလာ သည် နောက်ထပ် (၁၀)နှစ်မျှပင် မကြာ နိုင်တော့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံး စစ်အာဏာ ရှင် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု၏လက်သို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေစေ နိုင်သော အဖျက် လက်နက် ဆန်းကြီး ရောက်ရှိ သွားနိုင် မှုအပေါ် နိုင်ငံတကာ မှ စိုးရိမ် ထိတ်လန့်မှု မှာလည်း တစစဖြင့် တိုးမြင့် လာနေသည်။
မကြာသေးမီ နှစ်များအတွင်း အနုမြူစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ရေး မြန်မာအစ်ိုးရဘက်မှ အသည်းအသန် ဆောင်ရွက်လာမှုနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် နျူကလီးယား လက်နက်ဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းကြီး တစ်ခုကို အသက်သွင်းနေပြီဆိုသည့် အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေသည် ကောလဟာလတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သလို သတင်းမှန်သာ ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုပါက အရှေ့တောင် အာရှ ဒေသတစ်ခုလုံး၏ ရပ်တည်မှုအပေါ် ကြီးမားသော ခြိမ်းခြောက်မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး သုတေသီများက သုံးသပ် ပြောဆိုထားကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် မူလက ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး ရုရှားနိုင်ငံ၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်မူ အဆိုးရွားဆုံး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးနေသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော မြောက်ကိုရီးယားနှင့် လက်တွဲလာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အပယ်ခံ နိုင်ငံနှစ်ခု၏ အစိုးရချင်း ရင်းနှီးလာမှုနှင့်အတူ မြန်မာ့နျူကလီးယား လက်နက်အိပ်မက်မှာ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အကောင်အထည် ပေါ်လာဖွယ်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ရုရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံများမှ အကူအညီများ မျှော်လင့်နေသည့်တိုင် ထိုနိုင်ငံကြီးများမှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့လူမုန်းအများဆုံး မြန်မာစစ်အစိုးရအား အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီထောက်ပံ့ရေးတွင် အကန့်အသတ်များ မလွဲမသွေ ကြုံရမည် သာဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း မြောက်ကိုရီးယားမှာမူ ကွဲပြားသော အခြေအနေတွင် ရပ်တည်နေသည်။ သမ္မတ ကင်မ်ဂျုံအီလ်အုပ်ချုပ်သော အထီးကျန် နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်အားအကောင်းဆုံး လက်နက်နိုင်ငံတော်တစ်ခု ဖြစ်နေပြီး နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှုများကို မျက်ကွယ်ပြုလေ့ရှိသဖြင့် မြန်မာအစိုးရ မျှော်မှန်းသော နျူကလီးယားလက်နက် စီမံကိန်းအား စိတ်ပါလက်ပါ ကူညီလာဖွယ်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံလာနိုင်ခြင်းကြောင့် မြန်မာ့နျူကလီးယား လက်နက်များ ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းမှာ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အကောင်အထည် ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ လေ့လာသူများက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံအတွင်း နျူကလီးယားဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ပြန့်ပွားမှုသည် လျင်လျင်မြန်မြန် တိုးတက်လာနေကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။
အချို့သော နိုင်ငံရေး သုတေသီများက မြန်မာနိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား စီမံကိန်းမှာ ထင်သလောက် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပုံကြီးချဲ့ပြီး အစိုးရိမ်လွန်နေကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့သည်။ အမှန်ဆိုလျင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နျူကလီးယားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို (၁၉၅၆)ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ထိုအချိန်ကတည်းက မြန်မာ့အက်တမ်စွမ်းအင်စင်တာ (UBAEC) ကို ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပြီး (၁၉၆၂)ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ဦးဆောင်သော စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းမှု အပြီးတွင်မူ အဆိုပါစင်တာ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ မှေးမှိန်သွားခဲ့သည်။ ကာလကြာညောင်းပြီးနောက် (၂၀၀၁) ခုနှစ်၊ ဖေဖေ၀ါရီလမှ စတင်ပြီး လက်ရှိစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များက နျုကလီးယား လက်နက်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကို ပြန်လည်အာရုံကျလာသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ အက်တမ်စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း (၁၀)မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ရန် အကူအညီပေးသွားမည်ဟု အတည်ပြု ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် မြန်မာ့နျူကလီးယား အကောင်အထည် ဖော်နေမှုကို အာရုံစိုက်လာစေမည့် အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းသံလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ် ဇူလိုင်တွင်မူ စွမ်းအင်နှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဦးသောင်း၏ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော နျူကလီးယားစွမ်းအင်ဌာနကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ မြန်မာ့ကာကွယ်ရေး အကယ်ဒမီ(DSA)မှ ဘွဲ့ရအရာရှိများကို ရုရှားသို့ နျူကလီးယားဆိုင်ရာ ပညာတော်သင်များအဖြစ် စေလွှတ်ခဲ့တော့သည်။
(၂၀၀၂)ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ထိုစဉ်က မြန်မာ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဝင်းက မြန်မာနိုင်ငံသည် နျူကလီးယား စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ကြေညာသွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရ၏ အစစ်အမှန် ရည်မှန်းချက်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက သံသယရှိလာနေခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိများထံမှ စက်မှုလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်နိုင်ရေး စွမ်းအင်ကို နျူကလီးယားမှ ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း လေသံပစ်လာကြသည့်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရသည် နျူကလီးယား စွမ်းအင်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အသုံးပြုမည်မှာ သေချာပါသည်ဟု အာမခံဝံ့သူ မရှိခဲ့ချေ။ ရေအားလျှပ်စစ် အပါအ၀င် နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု မလောက်ငသည့် အခြေအနေများကြောင့် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခု တည်ဆောက်သွားရန် ကြံစည်နေပါသည်ဟု စစ်အစိုးရက ပြောဆိုနေသည့်တိုင် နိုင်ငံတိုင်းက သံသယ မျက်လုံးများဖြင့် စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ဆေးပညာ လေ့လာမှုအတွက်ပါ အသုံးချသွားမည်ဟု ပြောင်းလဲပြောဆိုလာပြန်သဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေး လာတော့သည်။ သို့သော်လည်း လေ့လာသူများက ရုရှား၏ အကူအညီဖြင့် မြန်မာအစိုးရသည် အနည်းဆုံး (၅)မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခုလောက် အနည်းဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ရန် မရမက ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်အထိ နျူကလီးယား သန့်စင်မှုဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များကို မြောက်ကိုရီးယားထံမှ မှီခိုရယူနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သုံးသပ်ထားသည်။
ထိုအခြေအနေများကြောင့် နိုင်ငံတကာ နျူကလီးယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေး ထိန်းချုပ်မှု အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အဆုံးဖြတ်ရ ခက်ခဲသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်လာရသည်။ လက်ရှိအချိန်သည် အမေရိကန်အနေနှင့် အီရန်၏ နျူကလီးယား အစီအမံများအပေါ် အပြည့်အ၀ အာရုံစိုက်နေသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နျူကလီးယားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ မည်မျှတိုးတက်နေသည်ကို ထောက်လှမ်းနိုင်ရန် အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် ရုရှားနှင့် တရုတ်တို့ကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံများ၏ ကျောထောက်နောက်ခံ အင်အားကို ရရှိထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား အစီအမံများကို ခိုင်မာသော အထောက်အထား မပြနိုင်ဘဲ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချနိုင်ရေးမှာ အမေရိကန်အတွက် အလွန်သတိထားရမည့် ခြေလှမ်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆာဒမ်ဟူစိန်သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေစေတတ်သော လက်နက်ဆန်းများ သေချာပေါက် ထုတ်လုပ်နေသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အီရတ်ကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ပြီးမှ မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက်မကိုက်ဘဲ သတင်းမှားကို ယုံစားမိသည့် အပြစ်အတွက် လက်ညှိုးထိုးခံရမှုမျိုး နောက်တစ်ကြိမ် ကြုံရမည်ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေနှင့် ၀န်လေးနေမည်သာဖြစ်သည်။
ထိုနောက်ခံဖြစ်ရပ်များ အားလုံးတို့ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ မြန်မာအစိုးရအနေနှင့် ၎င်း၏ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့ တိတ်တဆိတ် ချီတက်နေဖွယ်ရှိသည်။ အကယ်၍သာ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရတွင် အဖျက်စွမ်းအား အလွန်ကြီးမားပြင်းထန်သည့် နျူကလီးယား လက်နက်ကြီးများ အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရလာတော့မည်ဆိုလျင် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ကျီးလန့်စာစား ဖြစ်လာရမည်မှာ မလွဲနိုင်ပေ။ ထိုအကြောင်းကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ အစိုးရတိုင်း သဘောပေါက်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့မဖြစ်လာစေရေး မည်သို့ထိန်းချုပ်ရပါမည်နည်း။ လက်နက်ကိုင် အာဏာသိမ်းခဲ့သော အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုသည် နျူကလီးယား စွမ်းအင်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အသုံးချပါမည်ဟု ကြွေးကြော်လျက်ရှိသည်။ အမှန်လား၊ အမှားလားဆိုသည်ကိုမူ ကာယကံရှင် စစ်အစိုးရသာ အသိဆုံးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအတွက် မြန်မာ့နျူကလီးယား ပြဿနာမှာ အနာသိလျက် ဆေးအရှာခက်နေသော အခြေအနေ တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
Posted by Ashin dhamma at 12:39 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 4:22 AM0comments
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအချင်းချင်းလိမ်လည်ညစ်ပတ်ကောက်ကျစ်ယုတ်မာပက်စက်သည့် အမျိုးသားရေးသစ္စာဖောက် အမှားတရားများ အလွန်ထွန်းကားနေပါသည်။
မိမိရင်ထဲအမှန်တရားမြတ်နိုးမှုကို မိမိထံရောက်လာသောပိုက်ဆံများပေါ် စာရွက်အလွတ်များပေါ်
Posted by Ashin dhamma at 5:29 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 5:28 AM0comments
လူဆိုတာမွေးဖွားလာပြီးသည်မှသေဆုံးသည်အထိမျှော်လင့်ချက်ရှိတက်ပါသည်။လူတို့ ၏မျှော်လင့်ချက်တို့ ပြည့်စုံမူရှိရန်ကားမလွယ်ပါ။အများအားဖြင့်မပြည့်စုံသောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သူတစ်ယောက်အတွက်ပေါ့။
သုံးပြီးမပေါမရှားသူများကိုကြတော့မပြည့်စုံဟုသုံးနုံးကြတာပါ။ကျနော်လိုမြို မကျတောမဟုတ်တဲ့နေရာဒေသမှာမွေးဖွားရှင်သန်လာသူတစ်ယောက်မှာတော့ပြည့်စုံမူ့ ဆိုတာဝေလာမှာဝေးရောပေါ့။ဒါတောင်အဖေ့ရဲ့ရိုးသားကြိုးစားမူ့ တွေကြောင့်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးအဖြစ်နဲ့ မျက်နှာပန်းလှရှင်သန်နိုင်ခဲ့တာပါ။လူချင်းသာတူတယ်ဘဝချင်းတော့ကွာမှာပေါ့ဆိုတာကဒါကြောင့်မိုနဲ့ တူပါရဲ့မြန်မာတို့ ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေတာ။
ရွှေတိဂုံ၊မဟာမြတ်မုနိဘုရားသမိုင်းတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဝင်၊မဟော်သဓါ၊သရဲအလယ်ငပျင်းဝတ္တုအဆုံးပါဘဲ၊။တကယ်ပါရေးနေရင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။အဖေအပြောကောင်းလို့ လားတော့မသိကျနော်တော့ခုတောင်နားထောင်ချင်ပါသေးတယ်။
အမှန်တော့အဖေကျနော်တို့ ကိုအမြဲပုံပြောခဲ့ခြင်းဟာကျနော်တို့ ကိုဆုံးမမူတစ်မျိုးပါလားဆိုတာခုမှသိတာပါ။ဒါကြောင့်နဲ့ တူပါတယ်
ပညာရှိများက "လက်ဦးဆရာမည်ထိုက်စွာ၊ပုဗ္ပာစရိယမိနှင့်ဘ"ဟုဆိုခဲ့ကြတာကိုး။အဖေကကျနော့်တို့ ကိုဆဲဆိုရိုတ်နက်ခြင်းမရှိဘဲပြောဆိုခြင်းဖြင့်
အဖေဆုံးမခဲ့သောစကားနဲ့ ကျနော်တို့ သမိုင်းဆရာပြောသောစကားမတူခဲ့သောအချက်လည်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။အဖေကသားစာတက်
အောင်သင်ပါဟုဆိုသော်လည်းဆရာကမူစာတက်တာမကောင်းဘူးကွ။အထူးသဖြင့်တပည့်တို့ သမိုင်းကိုမတက်စေချင်နဲ့ သမိုင်းကိုတက်လာရင်၊သိ
နဲ့ လောကလူသားများကို"ချစ်သားတို့ လောကအကြောင်းကိုကားမစဉ်းစားသင့်ရာ" ဤလောကသည်အလွန်ပင်ရူပ်ထွေး၏စဉ်းစားသူကိုလည်းအ
ခေါ်သည်လို့ ပြောခဲ့သည်။သို့ သော်လည်းကျနော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲစေသောစကားအဖြစ်မှအပကျန်သောခံစားချက်
တွေ့ ရသည်။တက္ကသိုလ်သည်ကျနော်တို့ ၏စိတ်ဓါတ်များကိုမြင့်တင်ပေးရာကျောင်းတော်ဖြစ်သလိုကျနော်တို့ အားလုံး၏အမြင်များကိုပေါင်းစပ်ပေး
ပညာသင်ယူရေးစရိတ်ကြီးမြင့်မူ့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။နယ်ချဲ့ တို့ သည်မြန်မာမြေမှရရှိသောဘဏ္ဍာများကိုမြန်မာပြည်သူတို့ ၏အကျိုးကိုကားအသုံး
မပြုခဲ့မိမိတို့ ၏ကိုယ်ကျိုးရှာမူ့ တို့ ကိုသာပြုသဖြင့်ပြည်သူလူထုများမှာမွဲပြာကျဆင်းရဲခဲ့ကြရသည်။ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေသူများသည်ကား
နယ်ချဲ့ များမဟုတ်ခဲ့။သို့ သော်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသောသူတိုင်းတက္ကသိုလ်မတက်နိုင်ခဲ့။မြန်မာပြည်မှရရှိနေသောသယံဇာတများမှာလည်းရတာ
သာ။ကျနော်တို့ အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုပြောဆိုရေးသားဆွေးနွေးခွင့်မရှိ။ဇာဂနာအပြောနဲ့ ပြောရင်မှန်ကန်သူကွဲနေသည်။ကျနော်တို့ ၏ရှေ့ တွင်
မြင်နေရသောအရာအားလုံးမှာကျနော်တို့ အတွက်မကျေနပ်မူများနဲ့ သာပြည့်နှက်လာသည်။ကျနော်တို့ အားကူပါကယ်ပါအော်နေသည့်ဒုက္ခသည်
များသို့ နှယ်တောင်းပန်နေသည့်အလားခံစားလာရသည်။ကျနော်တို့ ၏စိတ်ဓါတ်များသည်ကားအားငယ်မူ့ နဲ
မှာသင်သောဘာသာရပ်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအာဏာရှင်တို့ ၏လုပ်ရပ်ကကျနော်တို့ ကိုဘာသာရပ်တစ်ခုအားသင်နေရသည့်အလားတက်မြော
က်လာကြသည်။ပြည်သူတို့ ၏ဘဝဖူလုံရေးသည်ပင်လျှင်ကျနော်တို့ ၏အရေးဖြစ်လာသည်။ကျနော်တို့ သည်ကားပြည်သူမှမွေးသောပြည်သူ့ သား
များဖြစ်ကြ၍သာဖြစ်သည်။ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်သို့ လာကြသည်မှာပညာသင်ကြားရေးအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံရေးလုပ်သပိတ်မှောက်ရန်မ
ကျနော်တို့ လိုချင်သောပညာရေးကိုကျနော်တို့ မသင်ကြားနိုင်ဘဲမြန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှအာဏာရှင်တို့ အားဆန့် ကျင်လာ
ရသည်မှာသင်တို့ ၏လုပ်ရပ်များကဆန့် ကျင်ခိုင်းနေသောကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ကျနော့်တို့ တွင်ကားအဖြစ်မရှိသင်တို့ တွင်သာအပြစ်ရှိသည်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြပါသည်။ကျနော်တို့ အားလုံးသည်တက္ကသိုလ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့်ရင်းနှီးလာကြသည်မှာ
တို့ များလျှောက်ရမည်သာဖြစ်သည်။အကိုကြီးများပြုခဲ့သောကတိသစ္စာတရားများမှာကျနော်တို့ အတွက်အားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
လာသောပညာရပ်များသာဖြစ်ပါသည်။ကျနော်ယနေ့ ထက်တိုင်မေ့မရသည်မှာသမိုင်းဆရာပြောခဲ့သော"စာတက်တာမကောင်းဘူးကွ၊အထူးသဖြင့်သမိုင်းကိုမတက်စေနဲ့ "
Posted by Ashin dhamma at 8:52 PM0comments
Cry Land မှ Smile Land သို့ အခမဲ့
အပြုံးတွေ ဝေဆာနေသော တိုင်းပြည် ကို အခမဲ့သွားလို့ရပါပြီ လို့ အဲအေရှ လေကြောင်းလိုင်း က ကြေညာသွား တာကို သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ အပြုံးတွေ ဝေဆာနေသော တိုင်းပြည်ဆိုတာက ထိုင်းနိုင်ငံ ကို ဆိုလိုတာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ၌ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်လုပ်ငန်းဟာ စီးပွားရေး၏ အရေးပါသော ကဏ္ဍ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းဌာန၏ အဆိုအရ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် ၁၄.၈ မီလီယံ ခန့် ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ၁၅.ရ သန်း ကျော် ရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်း တွက်ဆ ထားခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်လုပ်ငန်း မှ တနှစ်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅.၃ ဘီလီယံ ( ထိုင်းဘတ် ငွေ ၅၄၇ ဘီလီယံ) ၀င်ငွေရှိခဲ့ပါသည်။ ဒီဝင်ငွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသား ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်း၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မျှ ရှိပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ အတွက် ပြည်တွင်းခရီးစဉ် ၈၂ မီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ပြည်တွင်းခရီးစဉ် ၈၃ မီလီယံ ရှိကြလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ဒီလို စီးပွားရေး အတွက် အရေးပါသော ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြို့ရှိ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ် များ၌ ရက်သတ္တပတ်တပတ်ကြာ အစိုးရဆန့်ကျင်သော ဆန္ဒပြပွဲများ ကြောင့် ငွေကြေး မြောက်များစွာ ထိခိုက် နစ်နာခဲ့ကြရသည်။ နိုင်ငံတကာမှနိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ၃၅၀,၀၀၀ ကျော်ဟာ လေဆိပ် တွေမှာ ပိတ်ဆို့ ခဲ့မှုကြောင့်၊ ခရီးသွားလာမှုနှောင့်နှေးခဲ့ရပြီး၊ အတော်လေးစိတ် အနှောက် အရှက် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့အတူ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် မှီခိုနေကြရသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း ငွေကြေး မြောက်များစွာ ထိခိုက်နစ်နာ ခဲ့ရသည်။
ဒီလို ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသော ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကို ပြန်လည်ဦးမော့ လာအောင် ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အဲအေရှလေကြောင်းလိုင်းက လက်မှတ် ၁၀၀,၀၀၀ ကို ထိုင်နိုင်ငံသို့ အခမဲ့ စီးနှင်းခွင့်ပြု မယ်လို့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ကကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဲအေရှလေကြောင်းလိုင်းက ဗီယက်နမ်၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ စင်္ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ နှင့် တရုတ် နိုင်ငံများမှ တဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက်နေ့ မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အတော အတွင်း အခမဲ့ စီးနှင်းခွင့် ပြုသွားမယ်လို့ကြေညာသွားပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ ဒီရက်အတွင်း အခမဲ့ စီးနှင်းခွင့်ပြုရာမှာ ထိုင်း ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ အဲအေရှ လေကြောင်းလိုင်းဟာ တရုတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ အပါအ၀င် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ သို့ တပတ်လျှင် ခရီးစဉ် ၄၀၀ ကို ပျံသန်း ရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တပတ်လျှင် ခရီးစဉ် ၃ရ၈ ကို ပျံသန်းလျှက်ရှိတာကြောင့် ၊ လေကြောင်းလိုင်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်လုပ်ငန်းပေါ်မှာ အများကြီး မှီခိုနေတာကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီလို လက်မှတ် ၁၀၀,၀၀၀ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အခမဲ့ စီးနှင်းခွင့်ပြုသွားမည့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း လှုံ့ဆော်သည့် လှုပ်ရှားမှုဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်လုပ်ငန်းကို ပြန်လည် ဦးမော့လာစေလိမ့်မယ်လို့ အဲအေရှလေကြောင်းလိုင်း အကြီးအကဲ တိုနီဖါနန်းဒက်စ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားပါသည်။
အပြုံးတွေ ဝေဆာနေသော တိုင်းပြည်၏ အခြားတဖက် (သို့) Smile Land မှ Cry Land သို့
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ န၀တစစ်အုပ်စုက ”Visit Myamar year” ဆိုပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကို လှုံ့ဆော်သည့် လှုပ်ရှားမှုတွေကို အကြီးအကျယ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း န၀တစစ်အုပ်စု မျှော်မှန်း ထားသလို အောင်မြင်မှု မရှိဘဲ၊ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းမှုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာပြည်ကို လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့သော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ၏ အဆိုအရ Visit Myamar year ဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် အိပ်မက် ဆိုး တခုလို ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျနော် မြန်မာပြည်ကို သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သော ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံးစဉ် သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ကို အခုလိုကြားသိခဲ့ရပါသည်။
သူတို့ရဲ့ အတွေ့ အကြုံအရ ၇ နာရီသွားရမဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ ၁၄ နာရီလောက် အချိန်ပေးခဲ့ရတယ်။ မြို့ တွင်း ပြေးဆွဲနေသော အများပြည်သူ စီးနင်းသည့် ယာဉ်တွေဟာလည်း အိုးမင်းဟောင်းနွမ်းနေပြီး၊ မြန်မာဘာသာ ဖြင့်သာ ရေးသားထားသောဘက်စ်ကား နံပါတ် တွေ၊ ခရီးသွားလမ်းညွှန်တွေလည်း မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ ရေးသားထားတာကြောင့် ဘယ်ကားစီးရမှန်းမသိ၊ ဘယ်ကို ရောက်မှန်းမသိ၊ ဘယ်လိုသွားရမှန်းမသိဘဲ၊ အခြားဂြိုလ်ကမ္ဘာတခုကို ရောက်သွားသလိုခံစားခဲ့ကြရတယ် လို့ ပြောပြခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေဟာ မြေပုံလမ်းညွှန်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုဖော်ပြရေးသားထားတာကြောင့် ဘယ်နေရာကို ဘယ် ဘက်စ်ကား စီးရင် ရောက်မယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူသိနိုင်ကြပေမဲ့ ၊ မြန်မာပြည်မှာတော့ တော်တော် လေး ကို အခက်အခဲ ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ပြန်ပြောပြတာ ကြားခဲ့ရသည်။ မြန်မာပြည်၏ မြို့တော် ရန်ကုန်မြို့ မှာ တောင် တချို့တည်းခိုခန်းတွေမှာ လျှပ်စစ်မီး မကြာခဏဆိုသလို ပြတ်ခဲ့မှုတွေကြောင့် ၊လေအေးစက် မလာဘဲ ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုကို သာ ခံစားခဲ့ကြရတယ်။
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေဟာ သူတို့ သွားလည်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး၊ကျန်မာရေး အဆင့်အတန်းကို အကြမ်းဖျင်း သိရှိချင်ရင် ထိုတိုင်းပြည်ရှိ အများသုံအိမ်းသာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်တယ်လို့ ယေဘူယျ အားဖြင့် ပြောလေ့ရှိကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မြို့တော် ရန်ကုန်မှာတောင်အများသုံး အိမ်သာတွေကိုလဲ ရှာရ မလွယ်သလို၊ ရှိတဲ့ အများသုံးမြေအောက် အိမ်းသာတွေကလည်း ထိမ်းသိမ်းရှောက်မှု မရှိသည့်အတွက် ညစ်ပတ်နံစော်နေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ သိရသည်။ ခရီးစဉ်တချို့မှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ ကို နောက်က အမြဲတမ်း လိုက်ပါစောင့်ကြည့်နေသည့်အတွက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစိတ်အနှောက်အရှက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ တချို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ လည်ပတ်ခွင့် ဗီဇာ ၁ လ ရ ရှိခဲ့သော်လည်း ၃ -၄ ရက် နဲ့ ဘန်ကောက်သို့ ပြန်ပြေးသွားကြရသည်။
၁၉၉၆ မြန်မာ့ခရီးသွားနှစ် တွင် ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သော ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဂျိုး၊ ပေါလ်၊ ဂျိမ်းစ် နှင့် ဘရမ်ဒါ တို့ကို ဘန်ကောက်၌ ပြန်လည်ဆုံတွေ့စဉ်၊ မြန်မာပြည်၏ ထူးခြားသော အတွေ့အကြုံတွေကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည် အလည်အပတ် ခရီးစဉ်မှာ ဘာတွေ ထူးထူးခြားခြား တွေ့ခဲ့သလဲလို့ ကျနော် မေးခဲ့တယ်။ သူတို့ က မြန်မာပြည်မှာ ထူးခြားတာတွေ့ခဲ့တာကတော့ " Pagodas နဲ့ Soldiers" ကို သူတို့သွားခဲ့တဲ့မြို့ တိုင်းမှာ တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ရီသွမ်းပြောဆို ခဲ့ကြပေမဲ့၊ မြန်မာလူမျိုးတယောက် ဖြစ်တဲ့ ကျနော်အတွက်ကတော့ ငိုရခက်ခက်၊ ရီရခက်ခက်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ မှန်ပါသည်။ တကယ်တော့ အပြုံးတွေဝေဆာနေသော တိုင်းပြည် ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အခြားတဖက်မှာ ငိုကြွေးနေသောတိုင်းပြည် ဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အခြေအနေမှန်တွေကို သူတို့ တွေ့ရှိသွားခဲ့ကြတာပါဘဲ။
ဒါဟာ န၀တစစ်အုပ်စု၏”Visit Myamar year” မအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းခံတွေကို စာဖတ်သူတွေကို ကျွန်တော် ရှာဖွေလေ့လာထားသ၍ ဝေမျှတာပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် ဟာ အရှေ့တောင်အာရှ၏ တံခါးပေါက် သဖွယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကနေတဆင့် တခြားနိုင်ငံတွေ ကို ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ဟာ စတုဒီသာကျွေးတဲ့ အလှူမဏ္ဍပ်သာသာ အဖြစ်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီလို့ ........
Posted by Ashin dhamma at 5:58 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 1:18 AM0comments
နအဖ ခေါင်းဆောင်ကြီး သန်းရွှေ ၏ ခိုင်းစေချက်အရ အမည်စာရင်းပါ လူ (၂၀) ဦးအား မဲဆောက်မြို့ သို့စေလွှတ်။
Posted by Ashin dhamma at 12:53 AM0comments
မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသမီးတဦး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဒုက္ခသည်ခိုလှုံခွင့်လျှောက်
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုတွင်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သည့် အနုပညာရှင်မင်းသမီးတဦးသည် ဂျပန်အစိုးရထံတွင် ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းကဒုက္ခသည်ခိုလှုံခွင့်လျှောက်လိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။
အသက် ၃၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော အဆိုပါမြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသမီးသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်းက ရောက်ရှိခဲ့နေခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလဆန်းကျမှ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့၊ ရှင်နာဂါဝရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသော ဂျပန်လဝကရုံးသို့ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ယခုလိုဒုက္ခသည်လျှောက်သည်ဆိုတာကို မသိရှိရသေးသော်လည်း ဂျပန်ရောက်မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းများကြားထဲတွင် ယင်းကိစ္စနှင့် ပါတ်သတ်၍ အနုပညာရှင်များ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဖျော်ဖြေရေးအနေနှင့်လည်ကောင်း၊ အလည်ခရီးအနေဖြင့်လည်ကောင်း အကြိမ်ကြိမ်လာရောက်ဖူးကြသော်လည်း နံမည်ကြီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တဦးမှ ယခုလိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ခိုလိုခွင့်လျှောက်ထားခြင်းမျိုး ဘယ်ခေတ်အခါကမှ မရှိခဲ့ဖူးခြင်းကြောင့် လူပြောများနေလျက်ရှိသည်။
''အတော်အံသြမိတယ်ဗျ၊ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ကိစ္စမျိုးဂျပန်က မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းကြားထဲမှာ လာဖြစ်တာဆိုတော့၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ၊ ဒီမှာက ငွေရတာဘဲရှိတာ၊ အစစအရာရာဆုံးရုံးနစ်နာတယ်၊ အလုပ်ဆိုလဲ ဂျပန်လူမျိုးတွေမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မျိုး၊ အန္တယ်ရှိတဲ့အလုပ်မျိုး၊ ညစ်ပါတ်တဲ့အလုပ်မျိုး ဆိုတဲ့အလုပ်သုံးမျိုးဘဲလုပ်ရတာလေ၊ အင်မတန်မှပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ပြီးမှ ရပ်တည်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ ဒီဂျပန်မှာ လာပြီးဒုက္ခသည်အဖြစ်လာလျှောက်လိုက်တာဆိုတော့ ဗမာပြည်က အတော်အခြအနေဆိုးနေပြီလို့ဘဲ ပြောချင်တယ်ဗျာ...'' ဟု ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အနေကြာသော မြန်မာလူမျိုးတဦးမှ ၄င်းအမြင်ကို ပြောပြသည်။
နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးကမှု ''အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဂျပန်မှာ ဗမာတွေဒုက္ခသည်အဖြစ်လျှောက်ကြတယ်၊ တချို့က စီးပွားရေးကြောင့်၊ တချို့ကဗမာပြည်မပြန်ချင်လို့၊ တချို့နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်လို့ စသဖြင့်ပေါ့နော်၊ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် သာမန်လူအရပ်သားတဥိးအနေနဲ့ကတော့ သိပ်မဆန်းပါဘူးဗျာ၊ သို့သော် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက နံမည်ကြီးလူသိများတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တဦးက ဒီလိုလုပ်တာကတော့ ထူးဆန်တာတော့ အမှန်ဘဲ၊ သို့သော် ဘယ်လိုကြောင့်ဘဲ လျှောက်လျှောက်ရှေ့ပိုင်းမှာ ဂျပန်မှာဒုက္ခသည်လျှောက်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်နေကြတဲ့လူတွေအပေါ်ကိုတော့ လေးစားသမှုနဲ့ ကိုယ်ဘာကြောင့်လျှောက်တယ်၊ ပြည်တွင်းမှာ ဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးတွေကြုံလာတယ်ဆိုတာ ကို အများသိအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြသင့်တယ်၊ ဒါမှလဲ နအဖရဲ့ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှုတွေကို ဂျပန်တွေရော၊ ဗမာတွေရော၊ ပိုမိုသိမြင်လာပြီး နအဖစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေပါ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါလာပြီးဆိုတာ အားလုံးတကမ္ဘာလုံးကပါသိမြင် လာမှာ'''ဟုရှင်းပြသည်။
ယခုလို ဂျပန်လဝကထံတွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်လိုက်သည့် မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုသူမှာ 'ဟန်နီထွန်း'ဖြစ်သည်။
Posted by Ashin dhamma at 11:28 PM0comments
ဘန်ကီမွန်း တင်ဆက်မယ့် မြန်မာ့ရေးရာ ဆပ်ကပ် ပဒေသာ
Posted by Ashin dhamma at 2:02 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 1:45 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 8:13 PM0comments
သူ့ ကိုမှီရှာ လောကမှာလည်း
နေ့ စဉ်နှင့်အမျှ ချမ်းသာရ၏
Posted by Ashin dhamma at 2:36 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 2:33 AM0comments
ဒီမေးခွန်းက ကျွန်တော်တို့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ၂၀၁၀-ခုနှစ်-
ရွေးကောက်ပွဲက တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဖြစ်သလို ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ
အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမိသားစုများက အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲ ရွေးကောက်ပွဲကို တစ်ဖက်သတ်
ပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ ကြံ့ ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကြီးကိုအမာခံထားလို့ လှေကြုံစီးရေစုံမျှော နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့
အတူ ထင်ရာစိုင်းကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ အသိညာဏ်နဲ့မယှဉ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ 
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဟာ ပိုပြီးခက်ခဲရှုပ်ထွေးလာပြီး အခန့်မသင့်ရင် အလုံးစုံပျက်စီးရေးလမ်းကြောင်း
ပေါ်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့အချက်တွေကိုတင်ပြဆွေး
နွေးတဲ့အနေနဲ့ ဒီဆောင်းပါးကိုရေးရတာပါ၊ လက်ခံသည်ဖြစ်စေ ငြင်းပယ်သည်ဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ခုသောအတိုင်း
တကယ်တော့ စည်းကမ်း နဲ့ ဥပဒေဟာတူသယောင်ထင်ရပေမဲ့ အနှစ်သာရပိုင်းမှာများစွာကွဲပြား
ပါတယ်၊ အိမ်စည်းကမ်း၊ကျောင်းစည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်း၊ယာဉ်စည်းကမ်း၊စသည်ဖြင့် နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီး
သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေဟာ အပေါ်ကနေအောက်ကို ဒေါင်လိုက်ချမှတ်ထားတဲ့ အကန့်အသတ်တွေဖြစ်ပါ
တယ်။စည်းကမ်းဆိုတာ ထိန်းကျောင်းမှုသဘောကိုဆောင်ပေမဲ့ အားလုံးအပေါ်မှာတူညီတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု
ကိုမပေးနိုင်ပါဘူး၊လူနည်းစုအတွင်းမှာသာသတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ကိုးကွယ်မှု၊ မတူကွဲပြားတဲ့
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံအဆင့်မှာတော့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ပြီး အတင်းလိုက်နာခိုင်းလို့မရပါ
ဘူး။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင် စည်းကမ်းဆိုတာ ဦးဆောင်သူလူနည်းစုကချမှတ်ဆုံးဖြတ်ထားတာမှို့  အမိန့်အာဏာနဲ့ 
ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ပြည်သူလူထုအားလုံး၏ အသက်အိုးအိမ်၊ဓနဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို ကာကွယ်
စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ဖိနှိပ်မှုများမှကာကွယ်ရန်အတွက် ပြဌာန်းထားသော -
အရာဖြစ်သည်ဟု အခြေခံအားဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေ
(၁၀)ချက်မှာဆိုရင် ဥပဒေကို လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ခြံစည်းရိုးတစ်ခုလို့ ဥပမာပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလုံခြုံ
ဥပဒေရဲ့ အနှစ်သာရအပိုင်းပါ၊ ဥပဒေအားလုံးထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးက ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ
ဖြစ်ပြီး လူထုဆန္ဒနဲ့အတည်ပြုပါတယ်။ ထူးခြားတာက အခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကသာ ရေးဆွဲ
ခွင့်ရှိ ပြီး အခြားမည်သည့်အဖွဲ့စည်းကမှ ရေးဆွဲခွင့်မရှိပါဘူး။သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စစ်အာဏာရှင်
တွေက သူတို့စိတ်တိုင်းကျရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို အဓမ္မအတည်ပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မှာပါ။
စည်းကမ်းနဲ့ဥပဒေတို့ရဲ့ ခြားနားချက်ကိုတင်ပြပြီးတဲ့နောက် ဒီမိုကရေစီရဲ့ သဘောသဘာဝကို
တင်ပြပါ့မယ်၊ ဒီမိုကရေစီသည် လူထုအုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်ဖြစ်သည် အာဏာသည်လူထုထံမှ ဆင်းသက်သည်ဟု
ပညာရှင်များကအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်မှာ အခြေခံအကျဆုံးနဲ့အရေးအပါဆုံးသော
အချက်(၃)ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်က လူ့အခွင့်ရေးများကိုလေးစားလိုက်နာခြင်း။ဒုတိယအချက်က လွတ်လပ်
ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်(၃)ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေခံအချက်တွေမရှိဘဲနဲ့တော့ ဒီမိုကရေစီလို့ ဘယ်လောက်ပဲကြွေးကြော်နေပါစေ အရေခြုံထားတဲ့ဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများကို ယင်းနိုင်ငံမှပြည်သူများကလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းဖြစ်
သည်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်၊ အမှန်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး တရားဥပဒေရဲ့ရှေ့ မှောက်မှာလူအားလုံး တန်းတူညီတူ
ရှိခြင်း၊ ဥပဒေချိုးဖေါက်သူမှန်သမျှကို အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့ လွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေးယန္တယားဖြစ်ခြင်း၊
အစိုးရကိုယ်တိုင်က ဥပဒေများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း၊ စတဲ့အချင်းအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနပြုသူများရဲ့အဆိုအရ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာမည်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စေ
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှ
သာနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုများ ပိုမိုရောက်ရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပါသ
လား ဆိုရင်တော့ လုံးဝမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေရမှာပါ ၊ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီဝင်များနဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူကျောင်း
သားလူငယ်များကို ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးတာ၊ ဥပဒေအရခုခံချေပခွင့်မပြုတာ၊ဥပဒေအကျိုးဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထောင်
ချတာ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းစစ်ဆေးလို့ရလာတဲ့ ထွက်ချက်တွေကိုတရားရုံးမှာသက်သေတင်တာ၊ တရားရုံးတွေမှာဖြစ်
သလိုစစ်ဆေးပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်တာ၊ စတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ရင် အစိုးရက တရားစီရင်ရေးမှာဝင်
ရောက်လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ပြီး တရားစီရင်ရေးကိုလက်နှက်သဖွယ်အသုံးပြုနေတာဟာ အထင်အရှားဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအနေထားမှာ အစိုးရကိုယ်တိုင်က တရားလက်လွတ်လုပ်နေမှတော့ အနာဂတ်မှာ တရား
ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ ရွှေပြည်တော်မျှော်လေဝေး ပဲဖြစ်မှာပါ။ ဒါဆိုရင် စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီ ဆိုတာက
ဘယ်အရာကိုဘယ်သဘောကိုဆိုလိုပါသလဲ၊ ဘယ်လိုစည်းကမ်းမျိုးတွေဖြစ်ပါသလဲ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့-
ဒါတွေကိုမလုပ်ရဘူး၊ ဒီလောက်တော့လုပ်လို့ရမယ်၊ ဒါတွေကိုတော့ငါတို့ကဘဲလုပ်မယ်၊ ဒါတွေကတော့ လုပ်ချင်
သည်ဖြစ်စေ မလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ လုပ်ရမယ်၊ အစိုးရကိုအကြည်ညိုပျက်အောင်မလုပ်ရဘူး၊ မဆန့်ကျင်ရဘူး ၊
အစိုးရမကောင်းကြောင်းမရေးရဘူး၊ မကောင်းတာတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုမပြောရဘူး၊ အစရှိတဲ့စည်းကမ်းမျိုးတွေသာ
ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ စည်းကမ်းချိုးဖေါက်သူတွေအတွက် အပြစ်ဒဏ်များကိုတော့ ဥပဒေ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ
တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူအများစုကတော့ ကြောက်ပြီးစည်းကမ်းရှိသွားကြမှာ
ပါ။ မရှိနိုင်တာတွေကတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိနိုင်ဘူး၊ လူ့အခွင့်ရေးများအပြည့်အ၀မရနိုင်ဘူး၊ လွတ်လပ်တဲ့
များမဖြစ်နိုင်ဘူး၊နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မရာက်လာနိုင်ဘူး၊အစရှိတဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုး
မှာ ပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့ မရေရာတာတွေ ၊မသေချာတာတွေ ၊မလုံခြုံတာတွေ ၊အဆင်မပြေတာတွေ၊စတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ သင်တို့ရဲ့ လူသားဆန်မှုနဲ့ ဖြစ်တည်မှုတို့ကို သွေးစွန်းလက်ကြီးတွေ
က လုယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ၊ စည်းကမ်းများဖြင့်မွန်းကျပ်နေပြီး တ၀က်တပျက်လူသားများအဖြစ် အသက်ရှင်ရပ်
တည်သွားကြမှာလား၊ သို့တည်းမဟုတ် ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်လူသားများအဖြစ်နဲ့ အသက်ရှင်
ရပ်တည်သွားကြမှာလား ဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ပြီး အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါလို့
ရန်သူကြောက်ရွှံ့ သောတော်လှန်ရေးနယ်များဖြစ်သကဲ့သို့ ရန်သူ၏ပစ်မှတ်ထားအာရုံစူးစိုက်မူ့ ကိုခံနေရသည့်တော်လှန်ရေးနယ်ပယ်လည်းဖြစ်ပါသည်။တတိယနိုင်ငံရောက်နေကြသောလူအများစုတို့ သည်လည်းဒီနေရာများကိုအခြေခံခိုလုံပြီးမှရောက်ရှိသွားခြင်းသာဖြစ်သည်။တကယ်တော့တော်လှန်ရေးသည်ခက်ထန်
ပင်ပန်းသောခရီးလမ်းသာဖြစ်သည်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက " ရဲဘော်တို့ယခုစစ်မြေပြင်ကိုထွက်ရမယ်၊ဆင်းရဲမယ်၊
စကားဝိုင်းတစ်ခုတွင်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကပြောဖူးပါသည်။အရက်ဆိုင်ကိုသွားကြည့်လျှင်မူးရူးနေသူများကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်ပြီးသူတော်ကောင်းကိုတွေ့လိုလျှင်ကျောင်းကန်ဘုရား၌သွားကြည့်ရာ၏။ဟုဆိုပါသည်။တကယ့်ကိုယ်ကျိုးစွန့့် အနစ်နာခံလုပ်သူကိုတွေ့လိုပါလျှင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံလုပ်ဆောင်သင့်သည်သာဖြစ်သည်။
Posted by Ashin dhamma at 5:04 PM0comments
[ဦးဝင်းတင် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)]
ဦးဝင်းတင် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
Posted by Ashin dhamma at 7:25 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 11:23 PM0comments
မြတ်စွာဘုရားကမဟာပဓါနသုတ်တော်တွင်ဟောခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ "ဧကံဓမ္မံ အတီတသ ၊ မုသာဝါဒိတ ဇန္တုနော ၊ ဧတေသုပရလောကေသု၊ နတ္ထိပါပံအကာရိယံ" တဲ့ဆိုလိုတာက
တော့ လောကမှာမုသဝါဒဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူမည်တယ်လို့ ပြောတာပါ၊။ မုသားစကားတစ်ခွန်းကိုပြောဆိုမိတာနဲ့ ပစ္စုပာန်သံသရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကုန်လုံး လွဲချော်သွားနိုင်တယ်
ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟာမုသဝါဒကိုလောကလူသားများအနေနဲ့ အထူးရှောင်ကြဉ်ရမည့်တရားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လောကတွင်မကောင်းသောအရာကိုကောင်းတယ်
ဟုပြောဆိုရေးသားပြီးနေကြမည်ဆိုလျှင်လူသားအားလုံးကမကောင်းမူ့ ကိုကောင်းမူ့ ထင်ပြီးပြုလုပ်ကြမည်ဆိုပါကဘယ်မှာလူသားတွေအတွက်ကောင်းကျိုးကိုရနိုင်ပါမည်နည်း။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာကသံဃာတော်များကိုအတုပါဟုပြောဆိုပြီးရိုတ်နှက်ဖမ်းဆီးခိုင်းသည့်စစ်ဗိုလ်ကြောင့်အဟုတ်အတုထင်ကာရိုတ်နှက်သည့် ရဲဘော်များနှင့်လူများကိုကြည့်
လျှင်လည်းသိနိုင်ကြမည်ဟုထင်ပါသည်။ တကယ်လို့ သာထိုသူများကိုလမ်းပေါ်ထွက်မေတ္တာသုတ်ရွတ်တဲ့သံဃာတွေအစစ်ပါဆိုလျှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်
ထို့ ကြောင့်မုသဝါဒသည်ပစ္စုပာန်ကာလကိုရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်စေဘိသကဲ့သို့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များကိုလည်းယုံမှားသံသယဖြစ်စေ
သားမူ့ တွေကြောင့်ပစ္စုပာန်ရှိလူသားများကိုအကျိုးယုတ်စေသည့်ဖြစ်ရပ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါသည်။သို့ ပါသောကြောင့်လူသားများအဖို့ သမိုင်းကိုအမှန်
ပြောဆိုရေးသားဖေါ်ထုတ်နိုင်မူ့ ကိုသာပြုလုပ်သင့်ပါသည်။" မိမိပြောဆိုရေးသားသည့်သမိုင်းကြောင်းများမှာလွဲမှားနေခဲ့သောကြောင့်ခေတ်အဆက်ရန်
လူသားတို့ အတွက်မုသဝါဒဖြစ်ရမူ့ ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲခြားကြည့်မည်ဆိုလျှင်
(၁) အချင်းချင်းသဝန်တိုမူ့ ကြောင့်ဖြစ်တည်သည့်မုသဝါဒ
(၄)မိမိတွင်ရှိသည်ထက်ပိုမိုထင်ရှားစေလို့ သည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်မုသဝါဒ ဆိုပြီးအပိုင်းလေးပိုင်းခွဲကာလေ့လာနိုင်ပါသည်။
ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ်နှင့်လူ့ ဘဝတစ်လျှောက်တွင်လူသားများရင်ဆိုင်နေရသည့်အဓိကမုသဝါဒများဟုဆိုလျှင်လည်းမှားမည်မထင်ပါ။
ဥပမာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခံရခြင်းမှာဂဋုန်ဦးစော၏အာဏာကိုမတရားရယူလို့ မူ့ နဲ့ အင်္ဂံလိပ်တို့ ၏မြောက်ပင့်ပြောဆိုခြင်းမု
သဝါဒကြောင့်ဟုပြောဆိုရပါမည်။တကယ်လေးနက်စွာတွေးလျှင်ဖေါ်ပြပါအချက်( ၁၊၃၊၄)တို့ နှင့်တပါတည်းပါဝင်ပတ်သတ်နေသည်ကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မည်။
ချက်ကြောင့်အသက်ဆုံးရူံးနေကြရသည်သာဖြစ်ပါသည်။လွန်ခဲ့သောအတိတ်သည်ကားကမ္ဘာ့လူသားများအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွတ်နိုင်မူ့ အားနည်းချက်များကြောင့်ဆိုလျှင်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘိသကဲ့သို့ မြန်မာလူထုတို့ ၏ဗဟုသုတနိုင်ငံရေးအမြင်၊ပညာရေးအမြင်စသောနည်း
ယနေ့ သည်ဂလိုဘေလိုက်ဇေးရှင်းခေါ်အိုင်တီနည်းပညာရပ်များထွန်းကားကာလူသားတိုင်းပြည့်ဝသည့်လူ့ အခွင့်အရေးကိုလိုလားနေ
ကြပြီးစစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီရေးကိုလိုလားလာကြသည်။ဒီမိုကရေစီကိုကျင့်သုံးသဖြင့်လူ့ မူ့ ဘဝမြင့်မားလာသည်ကိုလည်းမြင်တွေ့ နေကြရသည်။
အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးများကိုမုန်းတီးကာတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့်လူပုဂ္ဂိုည်များကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းတွင်ရှိနေကြသည်။မြန်မာတို့ သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ
စတင်ကာတစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်လာကြသည်မှာယနေ့ အချိန်ထိဖြစ်သည်။အနှစ်(၂၀)ကာလအတွင်းတွင်အာဏာရှင်တို့ ၏ရက်စက်မူ့ 
များကြောင့်အသက်ဆုံးဘဝပျက်သွားရသည့်ရဟန်းရှင်လူအများအပြားရှိသည်ကိုလည်းမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ မြင်နေကြရပြီးဖြစ်သည်။ကျနော်တို့ တိုက်
ကျနော်တို့ အားလုံးသည်စစ်အာဏာရှင်တို့ ၏အကျင့်စရိုတ်လက္ခဏာကိုသိရှိနေကြပြီးဖြစ်သော်လည်းသူတို့ ဆွဲရာမုသဝါဒကိုကားမ
တော်လှန်နိုင်ခဲ့ဟုဆိုရပါမည်။အထူးဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်ကားအာဏာရှင်တို့ ၏မုသဝါဒအစားတော်လှန်ရေးရဲဘောအချင်းချင်းတို့ ကြားတွင်မ
လိုအပ်ဘဲဖြစ်ပေါ်နေသောမုသဝါဒတိုးပွားလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကျနော်တို့ ရဲဘော်များသည်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဘဝစွန့် တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါ
အဖွဲ့ အစည်းအချင်းချင်းဝေဖန်ပြောဆိုမူ့ တွေသာမကဘဲအဖွဲ့ တူအချင်းချင်းပြောဆိုပုတ်ခတ်မူ့ တွေပါတိုးပွားလာနေသည်။တချို့ 
ကကောင်းသောစည်းလုံးညီညွတ်မူ့ ကိုဖြစ်စေသကဲ့သို့ အားလုံး၏ဆန္ဒနှင့်လျော်ညီသောလမ်းစဉ်တခုကိုရရှိနိုင်စေပါလိမ့်မည်။သို့ သော်နောက်ကွယ်
တကယ်ဆိုလျှင်ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်တကယ့်အပင်ပန်းအဆင်းရဲခံကာတိုက်ပွဲဝင်နေ
သောရဲဘော်များမှာကျောင်းသားများသာဖြစ်သည်ဆိုလျှင်လည်းမှားမည်မထင်ပါ။ရှစ်လေးလုံးနဲ့ အတူမွေးဖွားလာသည့်အဖွဲ့ အစည်းများထဲတွင်ကျောင်း
သားတပ်မတော်သည်ထင်ရှားခဲ့သကဲ့သို့ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂသည်လည်းထင်ရှားသောအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။တခြားသောအဖွဲ့ အစည်းများအား
အချုပ်ဆိုရလျှင်အဖွဲ့ အစည်းများအားလုံးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲဝင်များသာဖြစ်သည်။ကျနော်တို့ သည်လူပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထား
သောအဖွဲ့ စည်းပေါင်းများစွာဖြစ်သော်လည်းတခုတည်းသောဦးတည်ချက်မှာတူညီနေသည်ကိုလည်းတွေ့ ရပါသည်။ထိုအဖွဲ့ အများစုမှာထိုင်းမြန်မာနယ်
စပ်တွင်အခြေပြုသလိုဘင်္ဂံလာဒေ့ရ်နှင့်အိန္ဒိယတို့ တွင်အများအပြားအခြေပြုလုပ်ရှားနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုသူများအားလုံးမှာကျနော်တို့ ၏လေးစား
မြတ်စွာဘုရားသည်ကာလာမသုတ်တွင်ဟောကြားခဲ့သည်မှာ " ချစ်သားတို့ ငါဘုရားဟောသောတရားကိုလည်းမှန်သည်ဟုမဆိုရာ။
တခြားသောသူများပြောသည်ကိုလည်းမှန်သည်ဟုမဆိုရာ။လောကယုတ္တိ၊အာဂါမယုတ္တိ၊သဘာဝယုတ္တိစသည်ယုတ္တိသုံးပါးနှင့်ညီမှယုံပါ။" ဟုမိန့် တော်
( လိမ်ညာလှဲ့ ဖျားပြောဆိုငြားမုချမအောင်မြင်ရာ)
Posted by Ashin dhamma at 11:08 PM0comments